Petro I 5 NA-TWI - Kɔkɔ a wɔbɔ adefo - Me a meyɛ - Bible Gateway
Petro I 4Petro II 1
Petro I 5 Nkwa Asem (NA-TWI)
5 Me a meyɛ ɔpanyin no, mitu asafo no mu mpanyimfo fo sɛ, meyɛ Kristo amanehunu no ho adanse nti n’anuonyam a ɛbɛba no bɛka me. Mitu mo fo sɛ, 2 monyɛ nguan a Onyankopɔn de wɔn ahyɛ mo nsa no nguanhwɛfo na monhwɛ wɔn yiye sɛnea Onyankopɔn pɛ sɛ moyɛ no. Monyɛ adwuma a monhwehwɛ ho akatua biara na mmom ɔpɛ ara na mopɛ sɛ moyɛ. 3 Monnhyɛ wɔn a wɔde wɔn ahyɛ mo nsa no so na mmom monyɛ nhwɛso pa mma nguan no. 4 Na sɛ Oguanhwɛfo panyin no ba a, wɔbɛma mo anuonyam ahenkyɛw a ɛho nsɛe da.